Geomarketing vs. Nzuzo: Mmetụta nke Geolocation na onye ọrụ nkịtị - Geofumadas
Geomarketing vs. Nzuzo: Mmetụta nke Geolocation na onye ọrụ nkịtị
Febụwarị, 2015 Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
Kemgbe nkwalite ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, geolocation Ọ bụrụla echiche nke ejiji, bụrụ nke a na-ahụta dị ka otu uru kachasị dị na ngwaọrụ ekwentị, ma e jiri ya tụnyere PC, n'echiche nke ndị mgbasa ozi.
Otú ọ dị, a na-atụle esemokwu nke nzuzo, nke, dị ka ụfọdụ si kwuo, njikwa onwe ya na-emetụta ya. Mgbe e mesịrị, anyị ga-ezo aka na nke a na nkenke.
Ojiji nke geolocation na ahịa efu
Otu n'ime ohere enyere site na ịre ahịa mkpanaka bụ na ụdị dị iche iche nwere ike iji teknụzụ ala iji ruo ndị ọrụ ozi nwere oge banyere ngwaọrụ nke ha. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ ịdọrọ ndị ahịa maka akara ahụ iji mechie ahịa. Agbanyeghị, ọ dị mma ịkọwapụta na mpaghara ala ahụ eweela oge iji wepụ.
Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ihe na-erite uru n'ọnọdụ ha, na-ahụwanye anya:
Ọganihu nke ngwa: Na omenala, a naghị ejikọta ozi na-ejikọta ọnọdụ ma ọ bụ mgbe niile.
Mmụba na ojiji nke ngwa ekwentị yana, na mgbakwunye, mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị na-eji ozi ọnọdụ iji rụọ ọrụ (ụlọ nri mpaghara site na Map Google, dịka ọmụmaatụ), emeela ka ndị ọrụ nwee ike ịkekọrịta nkọwa ahụ.
Ugbu a, ọ kachasị mfe maka ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ ma ọ bụ wepu njirimara nkekọrịta ọnọdụ, nke na-ezuru iji naanị otu Pịa. O bu ihe nkasi obi nke meworo ka uzo ihe nlere juo ebe nile di elu.
Geomarketing na ozugbo: los Ngwa ahịa nke oge a emeela ka nchịkọta dị iche iche nke ngwaahịa dị iche iche na mgbasa ozi mgbasa ozi ole na ole, dị ka ọnụ ụzọ maka ọtụtụ mgbasa ozi na-ad.
Ekele maka ihe abụọ a (ọganihu nke ngwa na geomarketing na ozugbo), ọ ga-ekwe omume ugbu a ịmepụta mkpọsa dabere na geolocation, Nnukwu iji nweta irè na mgbasa ozi.
Ndị ọrụ nweziri ike ịnata mkpọsa mgbasa ozi na-eburu n'uche ọnọdụ ha, ka ha na-eme nchọgharị site na ngwa.
Na geolocation Ọ na-emetụta nzuzo?
Ndị mmadụ, n'oge a, jiri ngwá ọrụ ọhụrụ nwere ike igosi ọnọdụ ha, na mgbakwunye, ha nwere ike were foto, na ozugbo, ihe ha na-eme, echiche na / ma ọ bụ mkpa. Otú ọ dị, n'echiche nke ụfọdụ, geolocation na-awakpo ikike dị nsọ nke ihe nzuzo, nke a na-akpọ "ikike nke nzuzo".
N'ezie, e nwere ngwa, dịka Google Earth, nke na-eje ozi dị ka onye ndu na, ọ bụghị, na-awakpo ya.
Agbanyeghị, arụmụka ka guzo banyere Geolocation na ha ka nwere ike imerụ ọrụ, estárseles nochigidere ha nzuzo, dị ka ihe ndị nnyocha ụfọdụ na nchegbu ekpughe enweghị ike na-enwe ekwu nzuzo.
Nsonaazụ nke nchọpụta ụfọdụ, na-egosi na ihe kariri ọkara ndị mmadụ na-eji ngwa mkpanaka geolocation, ha na-eche banyere mfu nke nzuzo, iji ọrụ mgbanwe ọrụ ha.
N'otu nnyocha, kpọmkwem na-enwe ọganihu na nche ụlọ ọrụ Webroot, 1.500 a gbara ajụjụ ọnụ nwe ngwaọrụ na Geolocation ike, gụnyere 624 ndị mmadụ na UK.
Ihe ize ndụ nke geolocation
Otu n'ime ọnọdụ nke na-egosi mmetụta nke ngwa ahụ na ndị ọrụ nọ, bụ na oge niile ha na-ekpughe ọnọdụ ha, ihe ha na-eme, ihe ha zụtara na, ọ fọrọ nke nta, ha na-ekwuwapụta na ha na-enweta ego na-ewepụ ego, n'agbanyeghị na ha agaghị efu efu. onye n’eme ya
Mana dịka ndị ọkachamara si kwuo, ọ bụghị maka mmemme ma ọ bụ ngwaike, kama banyere ndị ọrụ onwe ha, ebe ọ bụ na ha bụ ndị ga-amata data ha na-enye n'ebe ahụ nakwa mmetụta ha nwere ike inwe na ndụ ha.
Ma nke a anaghị eme naanị geolocation mana, ya na ụzọ ndị ọzọ na-ekwe ka iji ihe ọmụma eme ihe, nke kwesịrị ịbụ onye nwekwuo onwe ya. Dị nnọọ ka ọ na-ewe na ka na-aga n'ihu usoro mmụta maka iji Facebook, n'otu aka ahụ nwere ike ịbụ na usoro usoro nke ebe a.
Nke a bụ kpọmkwem ugbu a mkpa, n'ihi na ọtụtụ ndị na-amaghị nke pụtara ọrụ ndị a, ọtụtụ ndị amaghị na ihe oyiyi na-na-ewere ga-bipụtara ka a obibi ọhụrụ, zuru ezu na gị adreesị.
Ọ na-abịa ala ihe dị mkpa n'ezie bụ, tupu igosipụta ihe niile a na-eme, na nche nke ọ bụla onye na (ọrụ nke Geolocation), iji zere ọnọdụ nwere ike izere, n'ezie. Ya mere, ọ ga-ekwe omume iji kpuchido nchekwa site na ichedo nzuzo.
Previous Post«Previous Nweta ziri ezi na ihe dị n'okpuru site na iPad / iPhone
Next Post Ngalaba Ngwakọta NgwaahịaNext »